Ukwazi njani ukuba umntu othile ukuvimbe kuWhatsapp 2021
Wazi Njani Ukuba Umntu othile ukuThintele kuwe kuWhatsapp
Ukuba uthumela umntu imiyalezo kuWhatsApp, kodwa awufumani mpendulo, usenokuzibuza ukuba uvaliwe na. Ewe, i-WhatsApp ayiveli ngokungqalileyo kwaye iyatsho, kodwa zikho iindlela ezimbalwa zokuyiqonda.
Jonga Iinkcukacha zoqhakamshelwano kwiNgxoxo
Into yokuqala ekufuneka uyenzile ukuvula incoko kwisicelo se-WhatsApp se-iPhone okanye i-Android emva koko ujonge iinkcukacha zonxibelelwano phezulu. Ukuba awukwazi ukubona umfanekiso wabo weprofayili kunye nokugqibela kwabo ukubonwa, kunokwenzeka ukuba bakuthintele. Umfowunelwa wakho ngekhe wakhubaza umsebenzi wakhe wokugqibela ukubonwa.
Zama ukuthumela imiyalezo okanye ukufowuna
Xa uthumela umyalezo ngandlela thile ukuba ngubani okuvimbileyo, irisithi yokuhambisa iya kubonisa kuphela uphawu olunye. Imiyalezo yakho ayizukufikelela kuWhatsApp onxibelelana naye, ukuba ubathumele umyalezo ngaphambi kokuba bakuthintele, uya kubona endaweni yoko, ungazama ukubabiza. Ukuba umnxeba wakho awudluli, oko kuthetha ukuba usenokuba uvaliwe. UWhatsApp uya kuyifaka umnxeba, kwaye uyayiva ikhala, kodwa akukho mntu uya kuthatha kwelinye icala.
Zama ukubadibanisa kwiqela
Eli nyathelo liya kukunika olona phawu luqinisekileyo. Zama ukwenza iqela elitsha kuWhatsApp kwaye ubandakanye unxibelelwano kwiqela. Ukuba i-WhatsApp ikuxelela ukuba i-app ayinakongeza umntu kwiqela, oko kuthetha ukuba bakuthintele.
Wazi Kanjani Uma Umuntu Akuvimbele KuWhatsapp